အေးပြောသလိုဆွေမျိုးအရင်းကြီး ဖြစ်နေရင်ဖြင့် ပိုတောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြရပြီ။
ဒီနေ့ mmdailynews မှာကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသည့် ရဲရင့်သော မိခင်တစ်ဦး၏အကြောင်း ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ကာယကံရှင်ရောကျန်တဲ့မိသားစုအတွက်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမသိတဲ့ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသည့်သူမအကြောင်းကိုရေးချင်လာတယ်။ သူမအမျိုးသားကဆရာဝန်တယောက်ပါ။သူမမှာသား၂ယောက်နဲ့သမီးလေး၁ယောက်ရှိတယ်။
သူမအမျိုးသားက လည်းဆေးရုံမှာလုပ်နေတာဆိုတော့ချက်ချင်း သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး၊ကီမို၆ကြိမ်သွင်းရတယ်။
ဒုတိယကီမို၆ကြိမ်ထပ်ပေးတယ်။ သူမအားတင်းပြီးခံယူတယ်။နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဆိုတော့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးနေ၊ကလေးတွေကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်အမျိုးသားကလည်းအလုပ်သွားရနဲ့ သူမနေမကောင်းမလှုပ်နိုင်နေပေမဲ့၊နဲနဲနေသာတာနဲ့မီးဖိုထဲမှာသူမမိသားစုစားဖို့၊သူမအမျိုးသား
ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကို သူမအထူးကြိုးစားအားထုတ်တယ်။မထိုင်နိုင်ရင် အိပ်ရာထက်မှာလှဲပြီးတရားတော်တွေနာယူတယ်၊တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊တရားအမှတ်နဲ့နေတယ်။
ထမင်းစားဖို့ဇွန်းတောင်မကိုင်နိုင်ဘူး၊လျှာတွေရောသွားတွေရောနာနေလို့စကားကိုအသံထွက် အောင်တောင်မပြောနိုင်ဘူး၊အဲဒီလိုအခြေအနေမှာတောင်သူမအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမသောက်ပဲ တရားအမှတ်နဲ့ပဲနေပါတယ်။
Posted by ငွေစန္ဒာ at 8:56 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 19, 2010 at 11:11 PM
စိတ်စွမ်းအင်ဟာ အင်မတန် အေ၇းကြီးပါတယ်..ဖြစ်လာတာကိုကြောက်လန့်နေဖို့ထက် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ခုခံနိုင်မလဲက အဓိကကျတယ်..
ဝိပဿနာဟာ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတခု မို့ ကိုကြီးကျောက်တော့ အဲဒါကို အလေးထားတယ်
SHWE ZIN U November 20, 2010 at 6:44 AM
ညီမ ရဲ့ မျှဝေမှု့လေး ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ
ငွေစန္ဒာ November 20, 2010 at 8:30 AM
baby taster November 20, 2010 at 2:32 PM
အရမ်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ
Shinlay November 20, 2010 at 2:47 PM
စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်ထားပြီး ကြိုးစားပါလို့သတင်းပါးပေးပါ။
ချစ်ကြည်အေး November 21, 2010 at 9:15 AM
ညီမရေ....အမလည်း အိမ်ကလူကို ပြောထားတယ် ကင်ဆာများဖြစ်ရင် ကုမနေနဲ့တော့လို့ ၊ တရားနဲ့ပဲ သေမယ် အဲဒီ ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားနိူင်ဘူး၊ စိတ်ဓါတ် ကြံ့ခိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ ညီမရေ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 21, 2010 at 2:08 PM
လူတွေမှာ အဓိက မောင်းနှင်အားက စိတ်ပါဘဲနော်..
စဉ်းစားမိတယ်.. ကိုယ်တွေမှာလည်း ခုလို ကင်ဆာဆိုတာများသိရင်
ကိုကြီးကျောက်တို့လို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါ့မလား၊ ခုလို စိတ်မျိုးထားနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး။
အားပေးတဲ့ ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ငွေစန္ဒာ November 21, 2010 at 6:42 PM
baby taster လာလည်တာကျေးဇူးနော်။
မရှင်လေးရေ သတင်းပါးပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
မချစ်ကြည်နဲ့မချောရေ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး November 30, 2010 at 12:00 AM
ဘာရောဂါမဆို လူနာရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှုက အရေးကြီးပါတယ်။ ကင်ဆာ ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဝိပဿနာ တရား တန်ခိုးကတော့ အံ့မခန်းပဲနော်။
ဒီပို.စ်လေးဖတ်ရတော. စိတ်ရဲ.စွမ်းအားကို သိရပါတယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူမလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာနဲ့သူမတန်ဖိုးထားတဲ့မိသားစုလေးနဲ့အသက်ရှည်စွာနေထိုင်နိုင်ပါစေ
အိမ့်ချမ်းမြေ့ July 13, 2011 at 6:48 PM
အဲဒီသူမ ဆိုတာ ငွေစန္ဒာ ကိုယ်တိုင်ဆိုတာ မလေး ခုမှ သိရပါတယ် ငွေစန္ဒာ.. အရမ်း စိတ်မကောင်းပါဘူး.. ကျန်ခဲ့သူ သမီးလေးကော .. ငွေစန္ဒာချစ်ခင်ပွန်းကော.. ဘယ်လိုနေလိမ့်မလည်း....